Kooxda Filimka Raees Oo Tir Tireen Muuqaal Muran Badan Dhaliyay Hadaba Muxuu Ahaa Muuqaalkaas - Hablaha Media Network
Kooxda Filimka Raees Oo Tir Tireen Muuqaal Muran Badan Dhaliyay Hadaba Muxuu Ahaa Muuqaalkaas
HMN:- Kooxda filimka Raees ayaa si rasmi ah shaaca kaga qaadeen inay tir tireen muuqaal muran badan dhaliyay sidoo kalena dacwad ay ku muteesan karin.
Goos gooska filimka Raees markii lasoo bandhigay waxaa dacwad ka keeneyn koox diimeedka Shiicada ah ee Hindiya aad ugu badan.
Waxayna ka biyo diideen muuqaal SRK uu ka dul boodayo minaarad yar oo Masjid ku taalo taasi oo ay xitaa Muslimiin badan dhibsadeen walow masaajidka Shiica iska leeyihiin aadna uga caroodeen ficilkaas.
Hadaba inta aan dacwad lagu soo oogin filimka Raees ama gobolada qaar laga diidin daawashadiisa kooxda filimkaan waxay si rasmi ah shaaca kaga qaadeen muuqaalkii muranka dhaliyay inay gabi ahaanba jareen ama tir tireen.
Director Rahul Dholakia ayaa si rasmi ah u sheegay in Raees aan dhib gaar ah fariintiisa iyo muuqaaladiisa diimaha kala duwan Hindiya loogu geesan doonin sidaasna ay ku jaren muuqaalkii muranka badan dhaliyay.
Filimka Raees waxaa wada jilayaan SRK, Mahira Khan iyo Nawazuddin Siddiqui waxaana la daawan doonaa 25-ka Janaayo 2017.